Waa maxay kondhomku? | Zanzu
Kondhomku waa rabadh khafiif ah taas oo la geliyo guska. Waxaad gelin kartaa kondhomka guska adag ka hor gelinta. Waxay ururisaa shahwada marka ninku biyo baxo.
Qaabka ka hortaga uurka
Waxaad isticmaali kartaa kondhom muddada galmada haddii aad doonayso inaadan ilma dhasho Waa qaab ka hortagga uurka.
Ka hortagga HIV iyo STI
Kondhomka waxa uu ka ilaaliyaa adiga iyo lamaanahaaga HIV iyo badanka STI. Waxay yaraysaa khatarta ah caabuqyada STI yada kale. Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer si buuxda uma bogsiiso boogaha, meesha biyahu galeen iyo burooyinka maqaarkaaga ama ka lamaanahaaga. Tan macnaheedu waxa weeya in aad weli khatar ugu jirto cudurka wata STI.
Isticmaal kondhom marka aad samaynayso galmo siilka ama futada ah. Tani waxay kaa ilaalin doontaa HIV oo waxay yaraysaa khatarta in la qaado STI yada kale.
Ha gelin dhiiga ama shahwad afkaaga muddada galmada afka. Tani waxay ka dhigtaa khatarta cudurka HIV mid yar. Isticmaalka kondhomka marka aad samaynayso galmada afka ah waxay yarayn kartaa khatarta qaadista STI.
Haddii adiga iyo lamaanahaagu aydaan doonay inaad isticmaashaan kondhonmka, la hadal dhakhtarkaaga guud wax ku saabsan in lagaa baadho STI ama HIV.
STI Aids Netherlands waxay samaysay warsida ku qoran luqaddo kala duwan oo wata macluumaad ku saabsan kondhomyada iyo STIyada. Warsidahan waxaa laga soo dejisan karaa websaydka STI Aids Netherlands.
Waxaadka iibsan kartaa kondhomyada iyaddoon la qorin xaga farmasiga, farmasiile ama suuqa subarmaarkadka. Wakhtiyada qaarkood waxaad sidoo kale ka heli kartaa dukaamada kale, baararka, naadiyada habeenka ama mishiinada iibka alaabta. Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa internadka.
Kondhomka qiimahiisu waxa uu u dhexeeyaa 0,20 € iyo 0,90€. Kondhomada gaarka ah, tusaale ahaan oo leh ur gaar ah ama dhinacyo waa qaali.
Waa maxay qiimaheedu?
Waxaa sidoo kale jira kondhomyada dhediga.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Waa maxay kondhomku?